Isi Insurance:Ọ na-eme Sense ka amụma mkpuchi gị Isi Parts?
Isi Insurance: Ọ na-eme Sense ka amụma mkpuchi gị Isi Parts?
Ò nwetụla mgbe ị chere na nke insuring gị akụkụ ahụ? Ọ bụ ezie na a na-apụghị pụtara ma na Nigeria, ọ na-nụrụ kepu kepu na-ewu ewu Juju musician, Eze anwụ na-acha Ade, insured ya guitar-aghọrọ mkpịsị aka nnukwu ọtụtụ nde naira bụrụ na nke ụfọdụ dismemberment nke ndị a na mkpịsị aka. Ntak emi? Ọ bụ n'ihi na Juju Maestro a maara dị ka otu n'ime ndị kasị dexterous guitar ebre egwú na Nigeria, na ntighari na symphonic guitar nje adia enye ika nke Juju music. On ndị mba ọzọ idaha, na Busty Queen nke Country Music, Dolly Parton bụ na ndekọ na insured ya nnukwu bosoms maka ọtụtụ nde dollar; ugbu, Gene Simmons, Jennifer Lopez, na Michael Flatley n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ siri na-amara na ha insured ụkwụ ha, bums, noses, na ndị ọzọ na "gara aga na ndị bara uru" akụkụ ahụ maka nnukwu mkpuchi atumatu.
Ntak emi? Ihe kpatara ya bụ na-adịghị anya-fetched. Ndị a insured akụkụ ahụ, ndị a siri, ha na isi mmalite nke ego na isi ụdị nke ha celebrity statuses. Ndị a siri na-aghọta na ọ bụla ọnwụ ma ọ bụ mmebi ndị a akụkụ ahụ ga-ime ka ha ike igbanye ezi ego, ya mere ha na ngwa ngwa hụ ndị a akụkụ ahụ nke egwu n'ihi ha, nke mere na mkpuchi compensations ike ekpuchi maka ihe ọ bụla na ọnwụ nke ego ruru ndị a akụkụ ahụ. Iji mma ịghọta nke a ma ọ bụrụ na ị bụ onye na Naijiria, ihe ga-Cossy Orjiakor na-enweghị ya nnukwu ara? Ya nnukwu bosoms bụ ndị ya ika ma na-ere-ebe dị ka a na Naijiria celebrity omee na artiste; n'ihi ya, ọ bụ ihe kwere nghọta n'ihi na ya na-atụ egwu ihe ọ bụla na-eme ya nnukwu bosoms, ma ọ bụrụ na ọ na-ekpebi ka amụma mkpuchi ha n'ihi na ndị bụ ndị ya akụ na ahịa ika na Nigerian nkiri Mpaghara.
Ugbu a, ka ọ na-eme ka ọ bụla uche gị ka ị hụ gị akụkụ ahụ ma ọ bụrụ na ị na-agaghị a celebrity? Nke bụ eziokwu bụ na ọ na-eme obere mba uche-eme nke a, ọ bụ ezie na ị na-adabere na ezi nlegharị anya dị ka a ọkwọ ụgbọala; mkpịsị aka gị dị ka a na kọmputa Programmer; na ezi ụkwụ dị ka ihe nlereanya. O siri ike ịhụ na ị ga-enwe ike ọbụna ịhụ ihe ọ bụla mkpuchi ụlọ ọrụ na-ga-adị njikere ka amụma mkpuchi gị akụkụ ahụ, ma e wezụga n'ihi a ole na ole na United Alaeze. Insuring gị akụkụ ahụ nwere ike ịbụ nnọọ oké ọnụ ma e wezụga gị bụ a n'ụwa nile celebrity na nnọọ ọgaranya; ma e nwere dokwara nnọọ mma ọzọ.
I nwere ike na-aga n'ihi a ndụ mkpuchi iwu n'ihi na nke a ga-njinji gị ga-eme n'ọdịnihu ego na ezumike nká mkpa, ọ ga-emekwa ihe ike ka gị na ezinụlọ gị mkpa mgbe gị na onwu. Ma ọ bụrụ na ị na-adịghị amasị ụda ndụ mkpuchi, mgbe ahụ, ị ​​nwere ike na-ahọrọ ọrụ nkwarụ mkpuchi adịru na ị na-kpuchie maka ọrụ ma ọ bụ ụlọ mmepụta ihe mberede. Na a ọrụ nkwarụ ma ọ bụ dismemberment mkpuchi, ị nwere ike ụgwọ atụrụ ma ọ bụrụ na ị na-aka na ụkwụ ma ọ bụ n'anya ke N'ezie nke ọrụ. Nke a bụ ihe ndị ọzọ ọnụ na a ọma ọzọ ka insuring gị akụkụ ahụ, ma ọ bụrụ na ị bụ ezigbo ọgaranya na ndị dị otú ahụ amụma mkpuchi maka akụkụ ahụ gị bụ akụ na ika dị ka a celebrity.
Ịhọrọ Best Insurance Ike Gị Basic Mkpa